Xasan Sheekh Maxamuud Iyo Dhigiisa Talyaaniga Ayaa Maanta Kulan Ku Yeeshay Dalka Talyaaniga(Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Xasan Sheekh Maxamuud Iyo Dhigiisa Talyaaniga Ayaa Maanta Kulan Ku Yeeshay Dalka Talyaaniga(Daawo Sawirada)
Madaxweynaha Jamhuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo Madaxweynaha Talyaaniga Sergio Mattarella, ayaa maanta kulan ku yeeshay xarunta madaxtooyada dalka Talyaaniga ee magaalada Rome.
Madaxweynaha ayaa dhiggiisa Talyaaniga uga waramey xaaladda dalka Soomaaliya iyo horumarka laga sameeyay dhinacyada amniga, siyaasadda, dib u soo kabashada dhaqaalaha, kaabeyaasha dhaqaalaha iyo fidinta adeegyada bulshada.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka mahadceliyey taageerada Talyaaniga ee dib u dhiska Soomaaliya.
Waxaa uu sheegay in iyadoo laga duulayo xiriirka soo jireenka ah ee ka dhexeeya labada dal loo baahan yahay in Soomaaliya maalgashi lagu sameeyo.
Madaxweynaha Talyaaniga Sergio Mattarella ayaa u sheegay Madaxweyna Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigiisa in Talyaaniga uu sii wadi doono taageerada uu siiyo Soomaaliya, isla mar ahaantaana uu soo dhoweynayo codsiga Soomaaliya ee dhinacyada maalgashiga , iskaashiga dhaqaalaha, arrimaha bulshada iyo amniga.
Waxaa uu Mr Mattarella ku bogaadiyey Madaxweynaha Soomaaliya dadaalka uu ku bixinayo sugidda amniga, siyaasadda, fidinta adeegyada iyo arrimaha bulshada, kuwaas oo uu sheegay inay sii adkeynayaan barnaamijyada lagu xaqiijinayo dib u soo kabashada Soomaaliya, dowladda Talyaanigana ay taageero buuxda la garab taagan tahay.
Labada Madaxweyne ayaa sidoo kale ka hadley arrinta muhaajiriinta ku soo qulqulaya Yurub, gaar ahaan Talyaaniga, kuwaas oo qaarkood ay yihiin muwaadiniin u dhashey Soomaaliya.
Madaxweynaha Talyaaniga Mr Mattarella ayaa soo dhoweeyay fikir uu soo jeediyay Madaxweynaha Soomaaliya oo ahaa in dhalinyarada Soomaalida ee u soo tahriibtey Talyaaniga, isla markaana ku guuldareystey in rasmi ahaan loo qaabilo, la siiyo tababaro mihnadeed, dalkana dib loogu soo celiyo si xirfadaha ay barteen ay ugu adeegsadaan dib u dhiska Soomaaliya.
Kulankaasi waxaa goob joog ka ahaa mas’uuliyiin ka tirsan labada dal, waxaana uu ku dhammaadey jawi is afgarad leh.
Ciidamada Amisom oo isaga baxay Degmada Kuntuwaarey Ee Gobolka Shabellaha Hoose